भोलि र पर्सि उपत्यका बाहिर जान दिने सरकारको निर्णय – खबर खुराक
Home > कोरोना भाइरस अपडेटः > भोलि र पर्सि उपत्यका बाहिर जान दिने सरकारको निर्णय
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार १५:३७
काठमाडौं, २७ चैत । लकडाउनका कारण काठमाडौंमा रोकिएकाहरुलाई भोलि र पर्सि उपत्यका बाहिर जान दिइने भएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले दुई दिन उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय गरेको हो ।
११ चैतबाट लागू भएको लकडाउन लम्बिएपछि मानिसहरु हिडेरै काठमाडौंबाट बाहिर जान थालेका छन् । लकडाउन अझै लम्बिने अवस्था आयो भने दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको आपूर्तिमा समस्या आउनसक्ने भएकाले सरकारले गाउँ र्फकन चाहनेहरुलाई उपत्यका छाड्ने बाटो खुला गरेको हो ।
काठमाडौंमा रोकिएका र गाउँ फर्किन खोज्नेहरुलाई भोलि शुक्रबार र पर्सि शनिबार उपत्यका बाहिर जान दिइने भएको छ । सरकारले गाउँ र्फकन चाहनेहरुलाई उपत्यका छाड्ने बाटो खुला गरेको हो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले दुई दिन नागरिकहरुलाई उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय गरेको हो । कसरी पठाउने ? व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसको जिम्मा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङकाअनुसार लामो दुरीको रुटमा सरक्षाकर्मीले स्कटिङ गरेर लैजानेछ भने छोटो दुरीको हकमा कसरी लैजाने भने गृहमन्त्रालयले योजना बनाउँदैछ ।
प्रकाशित मिति: २७ चैत्र २०७६, बिहीबार १५:३७
Posted in कोरोना भाइरस अपडेटःTagged नेपालमा कोरोना भाइरस
Previous: सांसद यादवलाई क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
Next: काठमाडौंबाहिर जान दिने निर्णयमा सत्यता छैनः संयोजक ईश्वर पोखरेल